Fotoam-piraisam-be amin'ny namana 1
Ahoana no ahafahantsika milaza ny momba antsika tamin'ny fotoana naha-nofo farany antsika? nanontany mpitsidika iray ny alina iray taorian'ny lahateny.
Ny fomba tokana hilazana dia ny mahalala tsara toy izay niainantsika taloha. Ny fahaiza-manao izay ahatongavan'ny fahalalana azy dia ny fahatsiarovana, na filaminana avo kokoa. Raha tsy misy izany, ny tsirairay dia mety hametraka tombatombana momba izay taloha talohan'ny zavatra tiany indrindra ankehitriny. Ara-dalàna ihany ny hiheverantsika fa, raha manana safidy isika amin'io tranga io, dia tsy hisafidy ho toy ny toe-javatra na tontolo iainana izay hiainantsika isika, toy ny tsy mifanaraka amin'ny tsiron-tsika na fampandrosoana, ary amin'ny lafiny iray, raha toa ka tsy manan-tsafidy isika amin'izany, ny lalàna izay mifehy ny reincarnation tsy hametraka antsika ao anatin'ny fepetra tsy mendrika amin'ny fampandrosoana.
Mahatsapa fangoraham-po isika na manohitra ireo idealy, toetra, kilasin'ny olona, ​​karazan'olona, ​​asa-tanana, matihanina, asa tanana ary asa, ary izany dia manondro raha efa niasa na nanohitra ireo taloha isika. Raha mahatsiaro ao an-trano isika na tsy milamina ao anaty fiaraha-monina tsara na ratsy, dia izany no hilazana izay efa zatra antsika taloha. Ny lakandrano iray, efa zatra ny filentehany amin'ny trozona tranainy iray na eo an-dàlambe misy vovoka dia tsy mahazo aina amin'ny fiaraha-monina manja, laboratoara simista, na eny amin'ny rostrum. Na ny olona iray izay mazoto miasa mafy, mirona amin'ny filozofia dia tsy mahazo aina ary milamina rehefa milentika ny tenany, tsy voasasa, amin'ny akanjo mangovitra.
Azontsika atao tsara miaraka amin'ny fahitsiana ny fiainantsika taloha fa tsy amin'ny harena na ny toerana misy antsika amin'izao fotoana izao, fa amin'izay ny faniriantsika, ny faniriana, ny tiana, ny tsy tiana, ny fifehezana ny filana, tariho antsika amin'izao fotoana izao.
Teraka ny vatana ary maty ny vatana. Ny fanahy dia tsy teraka ary tsy maty, fa lasa miditra ao amin'ny vatana izay teraka ary avelany amin'ny vatana rehefa maty.
Mba hahafantaranao hoe firy ny fiainana lanin'ny fanahy iray eto amin'ity tontolo ity dia jereo kely ireo hazakazaka samihafa amin'izao tontolo izao. Diniho ny fivoarana ara-pitondran-tena, ara-tsaina ary ara-panahy afrikana afrikanina, na South Sea Islander; ary avy eo amin'ny Newton, Shakespeare, Plato, Buddha, na Kristy. Eo anelanelan'izany dia mieritreritra ireo ambaratonga samihafa amin'ny fampandrosoana izay atolotry ny olombelona. Aorian'izany dia manontany hoe aiza ny "I" no mijoro eo amin'ireto hevitra be ireto
Rehefa avy nanombatombana ilay toerana dia jereo hoe ohatrinona ny “izaho” nianarako tamin'ny zavatra niainana tamin'ny fiainana ankehitriny — mianatra kely ny olon-tsotra nefa manao ahoana ny “I” fihetsika izay nianarako hoe “izaho”. Aorian'ity fanontaniana mahaliana ity dia mety hamorona hevitra vitsivitsy momba ny isan'ny fotoana tsy maintsy nilaina niainana isika mba hahatratrarana ny fanjakana ankehitriny.
Tsy misy fomba iray hilazana ny olona niaina talohan'ny niainany taloha afa-tsy amin'ny fahalalana tena izy sy ny fahatsiarovan-tena hatramin'ny taloha. Raha nambara izy fa velona indroa na dimampolo alina, dia tsy mahasoa azy ny fampahalalana, ary tsy afaka manamarina izany izy afa-tsy amin'ny fahalalana izay avy amin'ny fanahiny ihany. Saingy amin'ny alàlan'ny fanoharana nomena antsika dia mety ho mamolavola hevitra sasany an-tapitrisany taona izay tsy maintsy efa nahatongavan'izany hatramin'izao.
Izahay dia. Tsy tsapanay ihany ny fomba itovizanay mandritra ny fiainana ao amin'ny vatana. Ity tontolo ity no sehatry ny asa. Ao no mahavelona sy hihetsika ny olona. Ny olombelona dia amboarampeo namboarina na mandrafitra lehilahy na fitsipika fito. Amin'ny fahafatesana ny ampaham-panahin'olombelona dia manasaraka ny tenany amin'ny ampahany lehibe, ary ny fitsipik'Andriamanitra na ny olona avy eo dia mitoetra ao anaty toe-piainana na fepetra nofaritan'ny eritreritra sy ny fihetsika tamin'ny alàlan'ny fiainana iray manontolo. Ireo fitsipika masina ireo dia ny saina, ny fanahy ary ny fanahy, izay, miaraka amin'ireo faniriana avo kokoa, dia mizotra amin'ny toe-javatra mety indrindra izay nofarain'ny fiainana eto an-tany. Ity toe-javatra ity dia tsy azo atao mihoatra ny eritreritra na ny idealy nandritra ny fiainana. Rehefa tapaka ireo fitsipika ireo avy amin'ny ampahany ara-nofo dia tsy tsapan'izy ireo ny ratsy amin'ny fiainana. Saingy tsapan'izy ireo ary miaina ny idealy izay natsangana nandritra ny fiainana vao nifarana. Fotoana fitsaharana iray ity, izay ilaina amin'ny fivoaran'ny fanahy satria fitsaharana amin'ny alina dia ilaina ny hampifanaraka ny vatana sy ny saina amin'ny hetsika amin'ny ho avy.
Amin'ny fahafatesana, ny fisarahana ny fomban'Andriamanitra amin'ny fitsipiky ny fiainana an-tany dia mamela ny fifangaroan'ny velona amin'ny idealy hiaina. Mahatsiaro tena izany eo anelanelan'ny reincarnations.
Isaky ny nanontaniana momba ny teôsôista iray dia nanohina ny fo, satria na dia ny hevitra momba an'i Adama sy Eva aza dia olona roa voalohany niaina teto amin'ity tontolo ity dia naseho tamin'ny tsy fahaizany nataon'ny fanadihadiana siantifika maoderina. miakatra matetika.
Ny lehilahy mahay tsara dia hilaza avy hatrany fa ny evolisiona dia mampiseho io angano io fa tsinontsinona. Manaiky an'io ny teôzôsôsista, fa kosa nilaza fa voatahiry ao amin'ity angano na angano ny fiandohan'ny tantaran'ny olombelona. Ny sekretera miafina dia mampiseho fa ny fianakavian'olombelona tamin'ny vanim-potoana niainany sy voalohany dia tsy toy ny ankehitriny, natao tamina lehilahy sy vehivavy, saingy raha ny marina dia tsy nisy firaisana ara-nofo. Io tsikelikely amin'ny fampandrosoana ara-boajanahary io dia misy firaisana roa na hermaphroditism, novolavolaina isaky ny olombelona. Na izany aza dia mbola nisy namorona ny firaisana ara-pitondran-tena izay nizarazara ny olombelona ankehitriny.
Adama sy Eva dia tsy midika lahy sy vavy iray fa ny olombelona manontolo. Izaho sy ianao dia Adama sy Eva. Ny reincarnations nataon'i Adama sy Eva dia ny reincarnation ny ain'olombelona ao amin'ny vatana maro samihafa, any amin'ny tany maro, ary amin'ny alàlan'ny hazakazaka maro.
Voalaza fa ny vanim-potoana teo anelanelan'ny fahatongavan-batana, na hatramin'ny fotoana nahafatesan'ny vatana iray mandra-pahatongan'ny fanahy ny itoerany tao anatin'ny iray izay teraka teto amin'izao tontolo izao, dia tokony ho dimy ambin'ny folo taona. Saingy tsy azo ampiharina amin'ny olon-drehetra izany, indrindra fa tsy ilay lehilahy maoderina mavitrika mavitrika.
Ny lehilahy tsara manantena ny lanitra, manao asa tsara eto amin'ity tontolo ity ary manana idealy ary manana eritreritra mazava, olona izay manantena mandrakizay any an-danitra, dia mety hanana lanitra mandritra ny fotoana lehibe, saingy azo antoka ny milaza fa toy izany tsy ny lehilahy antonony amin'izao fotoana izao.
Ny fiainana eto amin'ity tontolo ity dia ny hetsika izay afafin'ny masomboly. Ny lanitra dia toe-piainana na fitsaharana iray izay ialinan'ny saina ao amin'ny asany ary miasa ao amin'ny fiainana ka azo averina indray. Ny vanim-potoana averin-doha hiverina dia miantehitra amin'ny zavatra nataony tamin'ny fiainana sy ny toerana nametrahany ny fisainany, satria na aiza na aiza misy ny eritreritra na ny faniriana ho any amin'ilay toerana na ny toe-tsaina halehan'ny saina. Tsy azo refesina amin'ny taonantsika ny vanim-potoana, fa kosa amin'ny fahafahan'ny saina mankafy ny asa na fialan-tsasatra. Fotoana iray indray mandeha dia toa mandrakizay. Fotoana iray hafa dia toy ny tselatra. Noho izany ny fandrefesantsika ny fotoana, tsy ao anatin'ny andro sy taona izay tonga sy lasa, fa amin'ny fahafaha-manao an'io andro na taona io na ho fohy izany.
Ny fotoana voatondro hijanonantsika any an-danitra eo anelanelan'ny reincarnations. Samy manendry azy io izy. Ny olombelona tsirairay dia miaina ny fiainany manokana. Satria tsy mitovy amin'ny antsipirihany ny tsirairay avy tsy misy fanambarana voafaritra tsara momba ny fotoana azo anaovana ankoatry ny fanamboarana ny fotoanany sy ny fihetsiny, ary lava na fohy izany rehefa manao azy. Azo atao ny mihinana indray ny iray taona latsaky ny herintaona, na dia tsy mahazatra aza izany, na mamela ny fotoana nandritra ny an'arivony taona.
Toy izany koa no ataontsika rehefa manova akanjo isika rehefa nahavita ny tanjony ary tsy ilaina intsony. Ny maha-olona azy dia amina singa fototra izay natambatra ho endriny, nohajain'ny fitsipiky ny fiainana, tarihin'ny famporisihana ary ny fampiroboroboana ny faniriana, miaraka amin'ireo ambaratonga ambany ao an-tsaina izay mihetsika ao anaty eritreritra dimy. Ity ny fitambarana izay antsointsika hoe ny toetran'ny olona. Izy io dia misy mandritra ny taona maharitra hatramin'ny fahaterena; manompo amin'ny maha-fitaovana azy ary amin'ny alàlan'ny fiasan'ny saina, miditra amin'ny fifandraisana eto amin'izao tontolo izao, ary miaina ny fiainana ao. Amin'ny fahafatesana dia esorina io toetra io ary miverina amin'ny singa goavan'ny tany, rano, rivotra, ary afo, izay nitarihana sy nampifangaro azy. Ny sain'olombelona dia mizotra mankany amin'ny toerany aorian'ny fialam-boly izay mampiorina ary miditra amin'ny toetra hafa hanohizany ny fanabeazana sy ny niainany teto amin'izao tontolo izao.